ခွန်ဆာအကြောင်းသိကောင်းစရာ။ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
Sunday, March 10, 2013ခွန်ဆာ (၁၇-၂-၁၉၃၄ မှ၂၆-၁၀-၂၀၀၇) သည်လွိုင်မော် မြို့ တွင်မွေးဖွါးခဲ့သည်။ခွန်ဆာကို ဘိန်းဘုရင် ဟုသိကြပြီးရွှေတြိဂံဒေသတွင် ဘိန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ။
ခွန်ဆာသည် ရှမ်းပြည်သွေးစည်းရေးတပ်မတော်နှင့်Shan United Army
နှင့် the Mong Tai Army တို့တွင် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်၏ ။
ခွန်ဆာ၏ဖခင်မှာ တရုတ်လူမျိုးဖြစ်ပြီး အမေမှာ ရှမ်းလူမျိုးဖြစ်သည် ။ သူ၏ ကလောင်အမည်ကို ခွန်ဆာ(Khun Sa) အဖြစ်ခံယူခဲ့ပြီး ခွန်ဆာ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အေးချမ်းသောသူ ဟု အဓိပ္ပါယ် ရသည်။
သူအရွယ်ရောက်လာသောအခါ ကူမင်တန် တွင် စစ်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး တရုတ်ပြည်တွင်းစစ်တွင် စစ်ရှုံးသောအခါ ယူနန်(Yunnan) မှ မြန်မာ (Myanmar) သို့ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး သူ၏ ကိုယ်ပိုင် တပ်မတော်ကို ရာဂဏန်း အနည်းငယ်ဖြင့်ချက်ချင်းပင်ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ် ဦးနေ၀င်း အစိုးရ လက်ထက်တွင် ရှမ်းသူပုန်များကို တော်လှန် တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် အစိုးရအပေါ်သစ္စာရှိသော ဒေသခံစစ်တပ် အဖြစ် ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ထိုသဘောတူညီချက်မှ ပိုက်ဆံ များ ၊စစ်ဝတ်စုံများ နှင့် လက်နက်များ ရရှိခဲ့သည်။
ထို့နောက်သူ၏ စစ်တပ်ကို တိုးချဲ့  ဖွဲ့ စည်းခဲ့ရာ အယောက် ၈၀၀ ခန့် ရှိသောအခါ မြန်မာအစိုးရ နှင့် ပူးပေါင်းခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ရှမ်းနယ်မြေများစွာ နှင့် ၀ပြည်နယ်များ ကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး ဘိန်းဖြူ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို တိုးချဲ့  ခဲ့သည် ။
၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ကူမင်တန် လက်ကျန်များနှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရာမှ စစ်ရှုံး ခဲ့သောအရှိန်ကြောင့် ခွန်ဆာသည် စိတ်ဓါတ် အလွန်ကျဆင်းခဲ့သည် ။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် အစိုးရမှ သူ့အားဖမ်းမိခဲ့သည် ။
၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ကင်းလွတ်ခွင့် ရခဲ့ပြီး ရုရှား ဒေါက်တာနှစ်ယောက်ကို ခိုးမှုကျူးလွန်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည် ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။၁၉၇၆ခုနှစ် သူလွတ်မြောက်ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင် ငံမြောက် ပိုင်း ရှိ ဘန်ဟင်တက်(Ban Hin Taek) ရွာအတွင်းပိုင်းတွင် အခြေချခဲ့ပြီး ဘိန်းမှောင်ခိုတင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုတဖန်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
သူ၏ စစ်တပ်ကို ရှမ်းပြည်သွေးစည်းရေးတပ်မတော်(Shan United Army)ဟု နာမည်ပြောင်းခဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် များရရှိရန် မြန်မာအစိုးရ ကို ဆန့်ကျင် တိုက် ခိုက်ခဲ့သည်။
၁၉၈၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အမေရိကန်မူးယစ်ဆေးဝါးအတည်ပြု ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့  (US Drug Enforcement Agency)နှင့်ထိုင်းမြင်းစီး တပ်သား နှင့် မြန်မာမြို့ တွင်းပျောက် ကျား များ ဖြင့်ဖွဲ့ စည်းခဲ့သော(၃၉)ယောက်သော အဖွဲ့ ဖြင့် ခွန်ဆာ အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
သို့သော်လည်း ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် ပက်သုန်ချိုင်(Pak Thong Chai)မှ ထိုင်းမြင်းစီးတပ်ဖွဲ့  ၊ထိုင်းနယ်နိမိတ်လှည့်ကင်းရဲများ ၊ထိုင်းနန်းစဉ်တပ်မတော်(Royal Thai Army) တို့ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် မှ ဘန်ဟင်တက်(Ban Hin Taek) ရွာလေးမှ ခွန်ဆာ၏ဌာနချုပ်ကို ပူးပေါင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းတော်လှန်ရေးကောင်စီ နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ပြီး ပူးပေါင်းခြင်းကို ရရှိခဲ့သည်။ထိုပူးပေါင်းခြင်းကြောင့် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်နိမိတ် အားလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး မယ်ဆိုင် (Mae Sai)သည်လည်းရွှေတြိဂံဒေသ၏ ဘိန်းဖြူ မှောင်ခိုတင်သွင်းရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၇၄ မှ ၁၉၉၄ ခုနှစ် တိုင်အောင် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအတွင်း ရှမ်းပြည်နယ် တွင် ခွန်ဆာ၏ သြဇာ ကြီးမားမှုကို အံသြဖွယ် တွေ့  မြင်နိုင်သည်။ နယူးယောက် လမ်းများပေါ်မှ ဘိန်းဖြူ များ နှင့်ထိုင်း နှင့် လာအို တွင် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ရှိ ရွှေတြိဂံဒေသမှ ထွက်ရှိသောဘိန်းဖြူများဖြစ်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး အတည်ပြု အုပ်ချုပ်ရေး ရုံး၏ အဆိုအရ ရွှေတြိဂံ ဒေသမှ ဘိန်းဖြူများသည် (၉၀) ရာခိုင်နှုန်း သန့်စင်မှုရှိပြီး ဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းအားလုံးတွင် အကောင်းဆုံး ဟုဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ခွန်ဆာ၏ ဘိန်းဖြူရောင်းဝယ်ရေးတွင် ပန်းသေး တရုတ် မူစလင် လူမျိုး မဇန်းဝမ် (Ma Zhengwen) မှကူညီခဲ့သည် ဟုသိရသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် သြစတြေးလျ သတင်းထောက် စတီဗင်ရိုက်စ်(Stephen Rice)သည် ခွန်ဆာ(Khun Sa) အား တွေ့ ဆုံမေးမြန်းရန် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခိုးဝင်ခဲ့သည်။
သူ၏ဘိန်း သီးနှံ အားလုံး ကို (၈)နှစ်တာ ကာလအတွင်း အပြီးရောင်းချရန် သြစတြေးလျ အစိုးရအား ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။တစ်နှစ်လျှင်ဘိန်းဖြူ တန်ဖိုး သြစတြေးလျဒေါ်လာ သန်း (၅၀)ခန့်မျှ (၈) နှစ် ၀ယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကို သြစတြေးလျ အစိုးရမှ ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး လွှတ်တော်အမတ် ဂရဲ(တ်)မှ “သြစတြေးလျအစိုးရသည် ငြင်းဆိုကြောင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူ နှင့် အလုပ်မလုပ်ဘဲ ရိုးရှင်းစွာနေကြောင်း နှင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သော လုပ်ဆောင်မှု များကို ရှောင်ကြဉ်ကြောင်း ”ပြတ်ပြတ်သားသား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကြောင့်ပင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ နှစ်ခုစလုံး၏ ဘိန်းဖြူ ရောင်းဝယ်ရေးအားလုံးနီးပါး ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် နယူးယောက်(New York) သို့ ဘိန်းဖြူ တန်ချိန်(၁၀၀၀) တင်ပို့ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့မှုကြောင့်ခွန်ဆာ အား နယူးယောက် တရားရုံးမှစောင့်ကြည့် ခံနေရစဉ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှ သူ၏ဘိန်းထုတ်ကုန် အားလုံး ၀ယ်ယူရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။
ထိုသို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက သူ၏ အဆိုပြုချက်ကို ငြင်းဆိုလျှင်နိုင်ငံတကာ သို့ ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ခွန်ဆာသည် အမေရိကန် ၏ ဘိန်းဖြူမှောင်ခိုရောင်းချသူအဖြစ်စောင့်ကြည့်နေမှုအပေါ်စိုးရိမ်သောကြောင့် ၁၉၉၆ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင်လက်နက်ချခဲ့သည်။ ခွန်ဆာအား ဖမ်းဆီးပေးနိုင်သူအားအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂)သန်း ဆုငွေ ပေးမည်ဟု US DEA မှ ဆုငွေ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ခွန်ဆာသည် ရှမ်းပြည်နယ်မှ ရန်ကုန်မြို့ သို့ ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့သည်။
သူ၏ ဘ၀ကို ရန်ကုန်မြို့  ၊ မန္တလေးမြို့  နှင့် တောင်ကြီးမြို့ တို့တွင်အေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၆ရက် ၂၀၀၇ခုနှစ် ၊ ရန်ကုန်မြို့  တွင် ခွန်ဆာ အသက် (၇၃) နှစ် ကွယ်လွန်သည် ။ သူ၏ရုပ်အလောင်းကိုမြောက်ဥက္ကလာပရှိ
From- Dagon Thar(facebook)
This entry was posted on March 12, 2013, in အတ္ထုပ္ပတ္တိ, ဆောင်းပါး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အာဏာရှင် စစ်အစိုးရလက်ထက် ရာဇ၀တ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည်ဟု ကွင်တာနာ ပြောကြား
alaysia Relif Association NGO အဖွဲ့ မှ ရခိုင်မှ ဒုက္ခသည်များ အတွက် ထပ်မံ သွားရောက် လှူဒါန်း →